Amaxabiso eOfisi 365: UkuMisela isiCwangciso esifanelekileyo soMbutho wakho
NguRosemarie Withee, uKen Withee, uJennifer Reed
IOfisi 365 sisisombululo se-SaaS esisebenza kwilifu likawonke-wonke elinikezelwa ngokurhuma nguMicrosoft. Ubhaliso ngalunye luqulathe ilayisensi enye okanye ezingaphezulu kuxhomekeke kwiimfuno zombutho. Imirhumo inokuthengwa ngqo kwiMicrosoft okanye ngeMboneleli yeZisombululo zeMicrosoft (CSP). Xa uthenga umrhumo wakho ngqo kwiMicrosoft, inkxaso yakho ivela kwiMicrosoft. Ukuba uthenga umrhumo wakho kwi-CSP, inkxaso yeenkonzo ibonelelwa yi-CSP.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iOfisi 365 iza kwiinguqulelo ezimbini: Ikhaya neShishini. Njengoko igama lisitsho, uguqulelo lwasekhaya lwenzelwe ukusetyenziswa kwekhaya kwaye alubandakanyi izisombululo zemveliso ezinje ngokuTshintshiselana nge-Intanethi okanye isiXhobo se-Intanethi, ezisetyenziswa ngamashishini ngokuvelisa kunye nokusebenzisana.
Ukukhetha phakathi kweOfisi 365 yamashishini amancinci kunye nezicwangciso zamashishini
IOfisi 365 iza neetekhnoloji ezine eziphambili (okanye umthwalo njengoko iqela lakho le-IT linokuyibiza):
Tshintshela kwi-Intanethi: Isicelo sokuthumela imiyalezo egunyazisa i-imeyile yodidi lweshishini.
SharePoint kwi-Intanethi: Iqonga lokusebenzisana elisekwe kwiwebhu elisetyenziselwa ukugcinwa kwe-Intanethi, ukusebenzisana koxwebhu, ii-intranet, nokunye okuninzi.
Amaqela: Ngaphambili ibizwa ngokuba yi-Skype yeShishini, itekhnoloji esemva kwewebhu kunye nengqungquthela yeaudio, izingxoxo, ukwabelana ngescreen, unxibelelwano ngelizwi, kunye nokunye.
Izicelo zeOfisi: Izixhobo zokuvelisa kubandakanya i-Outlook, i-Word, i-PowerPoint, i-Excel, i-Access, nokunye okuninzi okufumaneka kwiinguqulelo ze-desktop kunye neze-Intanethi.
Ukongeza kwiitekhnoloji ezine eziphambili ezidweliswe apha, iOfisi 365 suite iza nezinto ezininzi, ezinye zazo zinokufumaneka kuphela kwisicwangciso samashishini amancinci, anje ngeMicrosoft Bookings, kunye nezinye ezifumaneka kuzo zonke izicwangciso, ezinje ngoMcwangcisi, iStaffHub, iiFom, iiPowerApps, kunye nokunye. Njengesisombululo se-SaaS, iOfisi 365 iya kuqhubeka iguquka, ngoko ungothusi ukufumana amanqaku amatsha kubhaliso lwakho olungenakugutyungelwa kule ncwadi.
Unga jonga ukuba zeziphi iinkonzo kunye neempawu ezikhoyo ngoku kwizicwangciso ezahlukeneyo zeOfisi 365 .
Ngelixa kuyinyani ukuba yonke imibutho kufuneka ibe nokufikelela kwimveliso nakwizixhobo zokhuseleko, ayisiyiyo yonke imibutho efuna iintsimbi ezifanayo kunye neempempe ukuqhuba ishishini labo okanye ukuhlawula ixabiso elifanayo leenkonzo. Akunangqondo kwishishini elincinci, umzekelo, ukuhlawula iifizi ezifanayo njengeshishini elikhulu elineemfuno eziphambili ezifana ne-eDiscovery yeenjongo zomthetho.
Ukujongana nale mfuno, iMicrosoft iyile izicwangciso ezahlukeneyo kunye nemirhumo kwimibutho enokukhetha kuyo. Kukho, nangona kunjalo, uninzi lwezicwangciso, ukubhaliswa, kunye nokudityaniswa kwelayisensi ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukwazi ukuba yeyiphi efanelekileyo umbutho wakho. Ukukunceda ukunciphisa ukhetho lwakho, jonga kumthi wesigqibo esingezantsi ukuze ukhethe ngokukhawuleza eyona ilungele wena ngokuphendula imibuzo emithathu.
Amashishini amancinci okanye izigqibo zomthi wesicwangciso somthi.
i-rp 10 325 ngekhokethi nganye
IOfisi 365 yeShishini elincinci
Izicwangciso zamashishini amancinci ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno eziqhelekileyo zamashishini amancinci anabasebenzisi abangama-300 okanye abambalwa. Zintathu izinto ezinikezelwayo kwizicwangciso zamashishini amancinci:
Ishishini leOfisi 365: $ 8.25 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abafuna kuphela usetyenziso lwedesktop yeOfisi kunye nokufikelela kugcino lwe-Intanethi.
Izinto eziBalulekileyo zoShishino kwiOfisi 365: $ 5 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abafuna i-imeyile yodidi lweshishini kunye nezixhobo zokusebenzisana kodwa abadingi zicelo ze desktop.
INkulumbuso yeOfisi 365 yeShishini: $ 12.50 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abafuna i-imeyile yodidi lweshishini kunye nezixhobo zokusebenzisana kunye nokusetyenziswa kwedesktop yeOfisi.
Ukungenzi nzuzo okuncinci kunye naphakathi, iMicrosoft ibonelela ngezicwangciso ezibini ezihambelana neZinto eziBalulekileyo zeShishini kunye nezicwangciso zePrimiyamu yeShishini kodwa ngexabiso elinguziro kunye ne- $ 3 ngomsebenzisi ngenyanga, ngokwahlukeneyo.
Ishishini kwiOfisi 365
Kukho izinto ezine eziphambili ekunikezelweni kwezicwangciso zeShishini ezingama-365 ukusuka kwi- $ 8 ngomsebenzisi ngenyanga ukuya kwi- $ 35 ngomsebenzisi ngenyanga:
IOfisi 365 ProPlus: $ 12 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abafuna kuphela usetyenziso lwedesktop yeOfisi kunye nokufikelela kugcino lwe-Intanethi.
IOfisi 365 E1: $ 8 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abafuna i-imeyile yodidi lweshishini kunye nezixhobo zokusebenzisana kodwa abadingi zicelo ze desktop.
IOfisi 365 E3: $ 20 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abadinga zonke izinto kwiOfisi ProPlus kunye ne-E1 kunye nokhuseleko kunye nezixhobo zokuthobela ezinje ngokubamba ngokusemthethweni, imigaqo-nkqubo yokugcina, imigaqo-nkqubo yokuthintela ukulahleka kwedatha, nokunye okuninzi.
IOfisi 365 E5: $ 35 ngomsebenzisi ngenyanga; ilungele abasebenzisi abadinga onke amanqaku kwiOfisi 365 E3 kunye nokusebenza okuphucukileyo kwezokhuseleko, uhlalutyo, kunye namandla ezwi njengokukwazi ukwenza kunye nokufumana iifowuni okanye ukuvumela abathathi-nxaxheba kwintlanganiso ukuba bacofe ukuya kwintlanganiso yeenkomfa zomsindo. Nceda uqaphele ukuba kukho intlawulo eyongezelelweyo ye- $ 24 ngomsebenzisi ngenyanga ukwenza iifowuni zasekhaya nezamazwe aphesheya. Kwiifowuni zasekhaya kuphela, umrhumo uyi- $ 12 ngomsebenzisi ngenyanga.
Ungadibanisa kwaye utshatise iintlobo ezahlukeneyo zezicwangciso zokubhalisela amashishini ngokusekwe kwiimfuno zabasebenzisi bakho, kwaye akukho mda kwinani labasebenzisi kwizicwangciso zeshishini.
Imfundo, urhulumente, kunye namacandelo angenzi nzuzo anezicwangciso ezihambelana namashishini. Izicwangciso zemfundo zibizwa ngokuba yi-A1, A3, kunye ne-A5; Izicwangciso zikarhulumente zibizwa ngokuba yi-G1, G3, kunye ne-G5; kwaye engenzi nzuzo ibizwa ngokuba yiNgenzi-nzuzo E1, Engenzi-nzuzo E3, kwaye Ingenzi-nzuzo E5. Qaphela ukuba amaxabiso ahlukile kula macandelo, ke jonga kwi-CSP yakho undwendwele Ofisi365.com .
Ukugcina abasebenzi bokuqala be-Office 365
Ukuba uqhuba ishishini kunye nabasebenzi abangenazo iitafile, abasebenzi beeshifti, abathengisi beevenkile, abaqhubi beelori, okanye abasebenzi abafanayo, ngekhe uzifune zonke izinto ezivela kuzo naziphi na izicwangciso zeShishini. Uninzi lwaba basebenzi babelana ngePC okanye basebenza kwivenkilana kwaye baneemfuno zokusebenzisana ezincinci kunye neemfuno zonxibelelwano ezinqongopheleyo. Akukho ngqiqweni kwaba basebenzi ukuhlawula ixabiso elipheleleyo lezicwangciso ezineempawu ezingaphezulu kokuzifunayo okanye ukubakhuphela ngaphandle kwizibonelelo zokusebenzisa iOfisi 365.
Ukusombulula lo mngeni, iMicrosoft iyile umnikelo obizwa ngokuba yiOfisi 365 F1 ejolise kubasebenzi bokuqala. Ye- $ 4 ngomsebenzisi ngenyanga, isicwangciso se-F1 sinika aba basebenzi uninzi lwemveliso kunye nezixhobo zentsebenziswano ezijolise kwezi ndawo ziphambili:
Ishedyuli kunye nolawulo lomsebenzi
Uqeqesho kunye nokukhwela ebhodini
Isazisi kunye nolawulo lokufikelela
Ukukhetha isiCwangciso seOfisi 365
IOfisi 365 iye yatyatyamba ngaphezu kweminyaka. Ayisiyomveliso elingana-nayo yonke imveliso. IMicrosoft iyakuqonda oku kwaye yaqhekeza imveliso kwizicwangciso ezithile ukuze ilingane iimfuno zabantu, iintsapho, amashishini amancinci, nayo yonke indlela eya kumashishini ezizwe ngezizwe nootitshala.
Xa uqala ukufaka intloko kwiOfisi 365, unokucinga ngayo njengeemveliso ezimbini ezahlukeneyo phantsi kwesambrela esinye sentengiso:
Ukuba ungumthengi, kwaye ekuqaleni ubunokucinga ngokuthenga isoftware kwivenkile efana ne-Best Buy, uya kuthi mhlawumbi ukhangele esinye sezicwangciso zeKhaya.
Ukuba ujonge iOfisi 365 yeshishini lakho okanye umbutho, uya kuthi mhlawumbi ukhangele esinye sezicwangciso zeShishini.
Xa ufika kwiphepha leOfisi 365, olu khetho lubekwe kakuhle phambi kwakho ngeqhosha lasekhaya kunye neqhosha leShishini.
Iphepha lokufika leOfisi 365.
Unokufumana izicwangciso zeOfisi 365 zootitshala ngokunqakraza Imenyu eyehlayo kwimenyu ephezulu kwi Iphepha lasekhaya leOfisi . Kukho izicwangciso zezikolo, ootitshala kunye nabafundi.
Ukuba ujonga isicwangciso esisesakho kwaye ucofe iqhosha lasekhaya, inkqubo yokuthenga kunye nokufaka iOfisi 365 ithe ngqo. IMicrosoft isoloko isitshintsha isigama ngoko ke sithandabuza ukubiza izicwangciso. Ngokubhala, babonelela ngezicwangciso ezibini ngokwahluka kwezi zilandelayo:
Ngesicwangciso seKhaya, unabasebenzisi abahlanu abanokufaka nganye iimveliso zeOfisi kwizixhobo ezihlanu.
Ngesicwangciso sakho buqu, unomsebenzisi omnye kuphela onokufaka iimveliso zeOfisi kwizixhobo ezihlanu.
Zombini ezi zicwangciso zikwisiseko sokubhaliselwa kwaye uhlala uqinisekisiwe ukuba unesoftware ehlaziyiweyo. Xa ingxelo entsha yeemveliso iphuma ngokukhawuleza uyifaka kwaye uyisebenzise. Ukuba awuyithandi imodeli yobhaliso, kukho ukhetho lokuthenga ngexesha elinye, kodwa awufumani iimveliso ezihlaziyiweyo njengoko ziphuma.
IOfisi 365 yeKhaya
Izicwangciso zeOfisi 365 yamakhaya ziboniswe apha ngezantsi.
IOfisi 365 yezicwangciso zaseKhaya.
Xa ujonge isicwangciso seshishini okanye sombutho, ukhetho lufuna ukucinga ngakumbi kunye nokucwangciswa. Kwakhona, uMicrosoft uhlala ejikeleza izicwangciso zokuzama ukwahlula amadini ngendlela ebalaseleyo kuhlobo ngalunye lombutho. Ukusukela ngo-2018, izicwangciso zeshishini zivela kwi- $ 5 ngomsebenzisi ngenyanga (isicwangciso se-Essentials Business) ukuya kwi- $ 35 ngomsebenzisi ngenyanga (isicwangciso seShishini se-E5). Ezi zinokuhlawuliswa rhoqo ngonyaka.
Ukuba usebenzisa Windows 10, ungonga imali ngokudibanisa iOfisi 365 nezinye iimveliso zeMicrosoft. IMicrosoft ilebheli kwezi phakheji zininzi njengeMicrosoft 365. Yijonge ngophendlo olukhawulezayo lukaGoogle.
IOfisi 365 yeShishini
Izicwangciso zeOfisi 365 zeShishini zibonisiwe apha.
IOfisi 365 yezicwangciso zeShishini.
Izicwangciso zeshishini zeOfisi ezingama-365 zitshintshile kule minyaka idlulileyo kwaye iMicrosoft iwele kwiqela elinomdla. Kukho izicwangciso zamashishini amancinci naphakathi kwaye kukho izicwangciso ezijolise kumashishini amakhulu. Enye yezinto eziphambili ekufuneka ujonge kuzo kukuba ingaba isicwangciso sibandakanya ii -application zeMicrosoft Office ezinokufakwa kwifowuni yakho yasekhaya (iLizwi, i-Excel, iPowerPoint, i-OneNote, i-Outlook, uMshicileli kunye ne-OneDrive).
Izicwangciso zeshishini zeOfisi 365 zichaziwe apha ngezantsi.
IOfisi 365 yeziCwangciso zeShishini
Cwangcisa Inkcazo Ixabiso / Umsebenzisi / Mo.*
Izinto eziBalulekileyo kwiShishini kwiOfisi 365 Iinguqulelo ezikwi-Intanethi zeOfisi. Iza nebhokisi yeposi ye-50GB (Utshintshiselwano), ukugcinwa kwefayile ye-1TB, kunye nengqungquthela yevidiyo. Elona nani liphezulu labasebenzisi ngama-300. $ 5.00
Ishishini leOfisi 365 Ayibandakanyi i-imeyile (Utshintshiselwano) kodwa ibandakanya uguqulelo olupheleleyo lweMicrosoft Office onokuyifaka kwisixhobo sakho sendawo. Elona nani liphezulu labasebenzisi ngama-300. $ 8.25
INkulumbuso ye-Ofisi yoShishino 365 Ibandakanya zombini i-imeyile (Utshintshiselwano) kunye nohlobo olupheleleyo lweOfisi yeMicrosoft. Elona nani liphezulu labasebenzisi ngama-300. $ 12.50
IOfisi 365 Pro Plus Kubandakanya uguqulelo olupheleleyo lweOfisi yeMicrosoft kwaye yongeza ukufikelela kuMicrosoft. Iiapps zeOfisi zinokufakwa kwizixhobo ezifikelela kwi-5 ngomsebenzisi ngamnye. Cinga ngalo mnikelo njengeOfisi kaMicrosoft nje, kuba ayibandakanyi i-imeyile okanye inkomfa. Kubandakanya i-1TB yokugcina iifayile kwi-Intanethi. Elona nani liphezulu labasebenzisi alinamkhawulo. $ 12.00
IOfisi 365 yeShishini E1 Isicwangciso seshishini sokungena kubandakanya izinto ezinje nge-imeyile yeklasi yeshishini, ikhalenda, kunye nabafowunelwa (Ukutshintshiselana) kunye ne-50GB yendawo, iintlanganiso ezikwi-Intanethi (Amaqela kunye ne-Skype yeShishini), kunye nenkqubo yolawulo lomxholo kunye ne-intranet (i-SharePoint). Kwakhona kubandakanya i-1TB yokugcina ifayile. Lo mnikelo wokuqala awubandakanyi uguqulelo olupheleleyo lweOfisi yeMicrosoft nangona kunjalo. $ 8.00
IOfisi 365 yeShishini E3 Kuyafana nesicwangciso se-E1 kodwa esi sicwangciso sibandakanya iinguqulelo ezipheleleyo zeOfisi yeMicrosoft enokufakwa kwisixhobo sakho sendawo kunye nebhokisi ye-imeyile engenamda. $ 20.00
IOfisi 365 yeShishini E5 Kuyafana nesicwangciso se-E3 kodwa esi sicwangciso songeza ezinye izinto ezongezelelekileyo zokhuseleko kunye ne-analytics kunye nolona longezo lukhulu kukuThungelwano lweeFowuni oluTshintshiweyo loluntu (PSTN) kunye ne-Cloud PBX yolawulo lweefowuni olusekwe kwilifu. $ 35.00
*Amaxabiso anokutshintsha. Unokongeza iindlela ezahlukeneyo, ezichaphazela ixabiso, nazo.
Kuyacetyiswa ukuba uphande ngononophelo kwisicwangciso ngasinye osikhethileyo ngokusekwe kwinto efumanekayo ngexesha ujonge ukumilisela iOfisi 365 kwishishini lakho okanye umbutho. IMicrosoft ihlala isongeza amanqaku amatsha kunye nokutshintsha izinto zijikeleze. Qiniseka ukuba ujonga izicwangciso ezithile ngaphambi kokuseka isigqibo sakho kumaxabiso adweliswe apha.
Ukongeza kwizicwangciso ezichaziweyo zeshishini kukwakho nokunikezelwa kweOfisi 365 yamaziko emfundo, amaziko karhulumente, kunye nemibutho engenzi nzuzo. Ezinye zezi zicwangciso zeOfisi zingama-365 simahla amaziko afanelekileyo kunye nemibutho.
amayeza kwi-hep b
Ijanumet 50 1000 mg
Yintoni i-montelukast ye
I-lidcous viscous swish kunye nokutshica
uyisebenzisa kanjani ithemometha yendlebe
Ipilisi ejikelezileyo eblowu 13
I-caffeine yokurhoxisa intloko